Shiinaha guji qufulka vinylalkohol saqafka saaraha iyo alaab-qeybiye | Karlter
Damaanad deganaanshaha in ka badan 10 sano, ganacsi ka badan 6 sano
Qaabka Naqshadeynta hadhuudhka qoryaha
Daaweynta dusha sare qotodheer, gacmo la xoqay
Nooca Badeecada Gogosha Vinyl
Magaca Badeecada Gogosha Luxry Vinyl
Muuqaalka Xiro-Biyuhu U Adkeysta Anti-siibashada
Dhumucdiisuna 4.0mm / 4.5mm / 5.0mmmm
Xiro Lakabka 0.3mm / 0.5mm
OEM Aqbal Oem
Erayada Furaha Vinyl Spc Plank
Wax ceyriin Virgin Vinyl Vinyl
Kartida Bixinta: 300000 Meter laba jibbaaran / Mitir laba jibbaaran Bishiiba
Gogosha gogosha Vinyl waa ilaalinta cagaaran ee deegaanka ee walxaha cusub ee qurxinta, waxaa sameeya qaab dhismeedka lakabyo badan oo is dulsaaran, guud ahaan oo ay ku jiraan lakabka polymer-iska caabin ah (oo ay ku jiraan daaweynta UV), daabacaadda lakabka filimka, lakabka fiber galaaska, iwm. waxaa jira sedex nooc oo taageero ah oo ay la socoto taakuleyn qallalan, sariir dabacsan iyo nidaamka guji.
Waa maxay Riix LVT?
In kasta oo ay ka muuqato nooc isku mid ah oo lakab ah sida Glue hoos, guji dabaqa LVT wuxuu leeyahay kala duwanaansho. Maaddaama ay u baahan tahay in lagu daro nidaamka gujinta, waxaad ka heli doontaa noocyada dabaqyada guud ahaan inay ka dhumuc weyn yihiin noocyada Glue down. Si kastaba ha noqotee, tani daruuri kama dhigayso inay sii waarayaan. Lakabka dharka lagu daro ayaa caadi ahaan la mid ah labada guji iyo Glue down LVT.
Nidaamka rakibaadda waxaa loo fududeeyay mahadnaqa nidaamka gujinta oo lagu daray. Noocyo kala duwan ayaa leh nidaamyo gujin iyaga u gaar ah waxayna kuu suurtagelinayaan inaad si fudud u riixdo foornada meesha. Tani waxay ka dhigan tahay inaad sida caadiga ah naftaada la jaanqaadi karto naftaada halkii aad ka siin lahayd xirfadlayaal inay kuu sameeyaan. Halkii aad ku habboonayn lahayd sagxadda hoose, waxaa caadi ah in la isticmaalo hoosta iyadoo la riixayo LVT. Tani waxay kor u qaadeysaa raaxada dabaqa, iyo sidoo kale yareynta xaddiga shaqada ee aad u baahan tahay inaad ku fuliso sagxadda hoose.
Faa'iidooyinka ugu weyn ee guji LVT waxaa ka mid ah
• Si dhakhso ah oo fudud loo rakibo
• Naqshadeynta qaro weyn ayaa ka dhigeysa inay dareemaan inay yihiin sagxad alwaax ah
• Kabo raaxo badan
Nidaamka rakibidda degdegga ah ee fudud waa mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee qaabkan sagxadda dhulka. Waxay macnaheedu tahay inaad adigu sameyn kartid naftaada, adoo keydsanaya hanti ku rakibidda.
Hore: 12.0mm sagxadda dhulka laminate
Xiga: EIR SPC gogosha vinylalkohol